Nin lix bilood u lugeynayay Moscow si uu u afgambiyo madaxweyne Putin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaNin lix bilood u lugeynayay Moscow si uu u afgambiyo madaxweyne Putin
Waddanka Ruushka, mucaarad kasta oo dowladda kasoo horjeesta si xun ayuu u burburaa, sidaas darteed waxaa mucjiso noqotay in la arko hal nin oo hoggaamiye ruuxi ah oo loo oggolaaday inuu ku lugeeyo waddanka oo dhan muddo lix bilood ah.
Alexander Gabyshev wuxuu doonayay inuu gaaro magaalada caasimadda ah ee Moscow, si uu fool-ka-fool uga hortago madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, laakiin waxaa hakiyay ciidamada booliska.
BBC-da ayaa ninkan la kulantay intii uu waddada ku sii jiray, ka hor inta aan la hor-istaagin.
Gabyshev wuxuu isku qeexay nin ka adag sheydaanka iyo ficilladiisaba.
Sida uu sheegay, wuxuu doonayaa inuu si khasab ah xilka uga qaado madaxweyne Putin, isagoo adeegsanaya hab nabadeed oo uusan dhiig ku daadanin.
“Nin awood dheeraad ah leh kaliya unbaa la dagaallami kara sheydaanka, laakiin ma jirto cid kale oo ka guuleysan karta, waxay doonaan ha noqdaan awood kastana ha heystaan, waayo cadowgu ma aha bani’aadan ee waa sheydaan, ninka awoodda Alle wata oo kaliya unbaana ka adkaan kara”, ayuu yiri Gabyshev.
Wuxuu wacad ku maray inuu lugeyn doono masaafe dhan 8,000km, oo guud ahaan dalka Ruushka ah, si uu u gaaro magaalada Moscow, halkaasoo uu ku yaallo xafiiska madaxweynaha.
Hase yeeshee ciidamada amaanka ayaa joojiyay markii uu lugeynayay ilaa 3,000km, oo u dhiganta 1,865 mayl.
Waxaa noo suurtagashay inaan la hadalno inta aan la xirin ka hor.
Isaga iyo shakhsiyaad kale oo soo raacayba waxay sheegayaan in howshoodu ay ku saleysan tahay hab nabadeed.
“Hal arrin oo aan ogahay ayaan kuu sheegayaa, taasna waa in marka aan tagno Moscow ay magaalada oo dhan noqon doonto mid ay harqiyaan mowjado naxariis ah”, sidaas waxaa yiri nin waayeel ah oo ka mid ah dadka la socda ninka loogu yeeray “hoggaamiyaha ruuxiga ah”.
Ka dib markii uu muddo lix bilood ah lugeynayay, Gabyshev wuxuu noqday qof caan ah oo laga yaqaanno dalka iyo dibaddaba, waxaana lagu aqoonsaday inuu yahay nin isagoo kaligiis ah u istaagay inuu isbaddal ka sameeyo waddanka Ruushka.
“Kaliya waxaan maqalnay in ninka sheydaamada ka adag uu u socdo inuu la kulmo Putin, si uu xilka uga qaado”, ayey tiri haweeney ka mid ah dadka shacabka ah ee mucjisada u arka ninkaas.
Qaar ka mid ah shacabka ayaa u muujiyay taageero, waxayna BBC-da u sheegeen inay qabaan fikrad la mid ah tiisa.
“Marka laga hadlayo in meesha laga saaro Putin, isku aragti ayaan ka nahay. Dhamaan kuwa xukunka haya waa in lag aero, waa waraabeyaal”, ayuu yiri nin la hadlay BBC-da.
Dowladda Ruushka ayaa si isdabajoog ah u beenisa eedeymaha ay dadka mucaaradka ku ah u jeediyaan.
Gabyshev iyo kooxdiisa yar waxay aaminsan yihiin fikrado adag oo la xiriira diinta masiixiga.
Mas’uuliyiinta ayaa ninkan dib ugu celiyay magaaladii uu kasoo jeeday, waxaana la geeyay isbitaal lagu daweeyo dadka dhimirka la’, laakiin markii dambe waa laga saaray isbitaalka.
Hadda wuxuu ka war sugayaa in lagu soo oogi doono dacwad dhinaca xagjirnimada ah iyo in kale.
Mar uu goor dambe BBC-da kula hadlay khadka telefoonka ayuu sheegay in mudaharaadkisii uu aaminsan yahay inuu dad badan dhiirrigaliyay, uuna rajeynayo inuu isbaddal sabab u noqon doono.